kaominina farany atsinanana amin’ny distrikan’i Tsaratanana manamorona an’Anjozorobe, faritanin’Antananarivo sy Amparatanjona kaominina avaratra andrefan’ny distrikan’Anjozorobe. Nahitana fanafihan-jiolahy tao Morafeno, Amparatanjona ny talata teo, sahabo tamin’ny 6 ora hariva. Ny zandary avy ao Betatao no nidina tany an-toerana ka nanampy ireo fokonolona nanara-dia. Omby enina no avotra tamin’ireo 34 very.
Tafaverina tamin'ny tompony ihany koa ny omby 23 taorian'ny fanarahan-dia nataon'ny miaramila ao amin'ny holafy 322/2 RM3 Ambakireny. Vantany vao naheno ny fanafihan-dahalo tao amin'ny fokontany Marovitsika distrikan'i Tsaratanàna ny miaramila notarihin'ny kapiteny Randriambelomana ny voalohan’ny herinandro teo, dia nanao ny asany avy hatrany ka izao nahitana vokatra tsara izao. Miandrandra vahaolana azo tsapain-tanana, tahaka ny “opération” ireo mponina izay mandry tsy lavo loha any an-toerana.